427s Izinto ezingama-7 ukwazi malunga neSitishi seTokyo | japan-guide.com images and subtitles
Ukusebenzela abakhweli abangaphezu kwesiqingatha sesigidi ngemini, isitishi saseTokyo sesinye sezona zikhululo eJapan. Isikhululo saqala ukuvulela uluntu ngaphezulu kweminyaka eli-100 eyadlulayo kwaye ngokukhawuleza yaba yinto yokuhamba isixhobo sokudibanisa iTokyo kunye neJapan iphela. Isikhululo seTokyo sikwindawo eyi-mile mile yokuphawula imigca yoololiwe abaninzi. Namhlanje, isitishi saseTokyo esisaziyo nesisithandayo sisiphumo seminyaka yokubuyiselwa kunye nolwakhiwo. Icala likaMarunouchi lisanda kubuyiselwa kubuqaqawuli bayo bangaphambili, bembali, ngelixa iYaesu icala libonelela ngenkangeleko yala maxesha. Ngamanqanaba ayo amaninzi kunye nokuphakama komhlaba okubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zokuthenga, zokutyela kunye neenkonzo, kulula ukuchitha imini yonke ilenga kwiSitishi saseTokyo kunye neendawo ezikufuphi. Ukwenza izinto zibe lula kuwe, siqokelele uluhlu lwezinto ezisi-7 ukwazi ngesikhululo seTokyo. UJAPAN RAIL CAFE IJAPAN RAIL CAFE yayiyeyokuqala eluhlobo lwayo ukuvula eJapan. Ifumaneka ngaphesheya kwiSango laseYaesu eliPhakathi lesitishi saseTokyo, inendawo yokuhamba ikhawuntare kunye nendawo yokutyela enika abahambi ulwazi olusezantsi kunye neJapan izitya. Umhlobiso wangaphakathi kunye nezikhumbuzo kwiiJAPAN RAIL CAFE zitshintsha amaxesha ngamaxesha kwaye ugxile kuzo mmandla owahlukileyo weJapan ixesha ngalinye. Abasebenzi kwikhawuntara yokuhamba banika iingcebiso zokubona indawo kunye nolwazi kunye nenkqubo ukudlula koololiwe kunye nokuthengwa kwetikiti. Ezi nkonzo zibonelela ngenkqubo yokulungiselela uhambo egudileyo engenazintlungu, ebaluleke kakhulu xa undwendwela indawo entsha. Isikrini esikhulu esisebenzayo sibonisa iividiyo zokuhamba kunye noluhlu lwemisebenzi. Indawo yokutyela yindawo ethe tyaba kwaye ayiqhelekanga, ilungile ukudibana nabahlobo okanye ukugqithisa ixesha Ngaphambi okanye emva kohambo lukaloliwe. Ukutya isidlo sangokuhlwa kunokujonga phambili kwisitya saseJapan, kwaye kukudibanisa kunye neentlobo ezahlukeneyo zotywala kunye neziselo ezinganxilisayo. Iibhokisi ze-takeaway ze-bento nazo zingathengwa, kuba zifutshane ngexesha. Okokugqibela, indawo yesiko le-tatami elihonjiswe ngokwesiko kwicandelo le-cafe linikezela iindwendwe indawo yokuthatha iifoto zesikhumbuzo. inkonzo ye-ecbo yokunxiba Ukufumana ikhitshi yemali engasebenziyo kwisitishi saseTokyo ingaba luphando kokuluphengayo ngakumbi ngexesha lexesha lokuncipha. Ukusetyenziswa kwenkonzo ye-ecbo ingubo kuvumela umntu ukuba abaleke konke oko kubunzima kwaye ngqo kwa a ngaphandle kwemithwalo ngaphandle. Iinkonzo zokugcinwa kwemithwalo zemihla ngemihla zinikezelwa nge-ecbo ingubo, elungileyo elungileyo kwabo bafuna ukuhamba ukukhanya kwiihambo zobusuku. Kukho izinto zokubala ezininzi ze-ecbo kwisikhululo saseTokyo. Ukuze usebenzise le nkonzo, yenza nje ukubhuka kwemithwalo kunye nentlawulo kwi-ecbo Ingubo yewebhusayithi kunye nentloko kwikhawuntara ngosuku lokulahla umthwalo wakho. Isakhiwo saseTokyo Marunouchi Isakhiwo saseTokyo sasekuqaleni senziwe nguTatsuno Kingo, umyili olungileyo waseJapan ukususela ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, kwaye yagqitywa ngo-1914. Nangona kunjalo, isakhiwo sesikhululo sonakaliswa kakhulu ngexesha le-WW2 kwaye inguqulelo elula kuphela Isakhiwo saphinda sakhiwa emva kwemfazwe. Ukususela ngo-2007 ukuya ku-2012, isakhiwo sesikhululo sabuyiselwa kubuqaqawuli baso bangaphambi kwemfazwe. Kuthathe eminye iminyaka emihlanu ukuze iplaza ephambi kwesikhululo ukuba ibe mhle. Namhlanje, iindwendwe ziyayibona indlela iSitoko seTokyo esasibonakala ngayo xa sasiqala ukwakhiwa ngo-1914, agqibezele kunye namazantsi emantla nakumazantsi emiphetho ngokulandelelana. Igalari yesitishi saseTokyo Igalari yeSitishi saseTokyo yindawo yobugcisa ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi isakhiwo. Ukongeza kwimiboniso yethutyana, igalari yindawo entle yokubona ezinye isitena sokuqala kunye nolwakhiwo lwangaphakathi lwesitishi saseTokyo, olubonelela ngokwahlukileyo Umxube wobugcisa kunye nelifa lenkcubeko. Ukutya kunye nokuhamba kubahambi ngeSitishi seTokyo soze babe nexhala lokuba balambile okanye bangafumani nto banokufuna okanye bangayifuni. Kukho inqwaba yeeresityu kunye neevenkile zombini ngaphakathi kwendawo enetikiti nangaphandle kwindawo yokufikelela simahla yeTokyo Station. Ngaphakathi kwindawo enetikiti kukho iGransta kunye neendawo zokuthenga ezinendawo yokutyela apho enye Ungafumana iintlobo ezininzi ezilungele ukutya izidlo, iidessert kunye nezikhumbuzo zokuhamba, kunye ne I-Ekibenya Matsuri, ivenkile edumileyo ye-bento ethengisa ukutya kwemini enesandisi esivela kulo lonke ilizwe. Ngaphandle kwindawo ekhululekileyo yokufikelela, iKitchen Street yinye yeendawo zokutyela ezininzi imimandla ebonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutya. Ihotele yesitishi saseTokyo ihotele yesitishi saseTokyo savulwa ngo-1915 njenge ihotele enqabileyo yokutya kwiindwendwe ezibalaseleyo ezivela phesheya kunye nasekhaya. Ifakwe ngaphakathi kwesitishi saseTokyo iMarunouchi isakhiwo, iodolo yaseYurophu yasekuqaleni Ihotele inamagumbi okundwendwe ayi-150, indawo yokutyela ezilishumi kunye nemivalo, kunye nokuqina kunye amaziko e-spa. Amanye amagumbi anikezela ngombono omkhulu kwicala laseMarunouchi kwiSitishi seTokyo, kwaye kukho iindawo apho iindwendwe zihlala zijonga phezulu ukuze zibone uyilo lwamadayile kwaye ezantsi esitishini ngokwayo. Ayisiyo kuphela inkonzo yokungena ezindlini ngocwangco, ukuhlala iindwendwe ezifika nguNarita Express Uloliwe osuka kwisikhululo senqwelomoya iNarita okanye ngesitimela esinenqwelo moya unokufumana ukonwaba ekungeneni kumnyango wenkonzo yecala. Iindawo ezikufuphi nendawo yeSitishi seTokyo Kukho iindawo ezininzi zokubona ngaphakathi ukuhamba ngokulula kwesitishi saseTokyo, kubandakanya iMarououchi kunye neOtemachi kwizithili zeshishini kunye nebhotwe le-Imperial. Kwizakhiwo ezi skyscraper ezijikeleze iSitishi seTokyo kwicala laseMarunouchi, iMarunouchi Ulwakhiwo, iShin-Marunouchi kunye neJapan Post tower KITTE zibonelela iindwendwe uninzi lwezinto ezahlukeneyo zokuthenga kunye zokutya. Iitreyini kwezi zakhiwo zontathu zibonelela ngombono omuhle webala lesitena elibomvu eTokyo Isikhululo. Kude kude, i-Imperial Palace kunye ne-Imperial Palace East Garden, ezikhoyo Kwimihlaba yangaphambili yeNqaba ye-Edo, yenza utyelelo lwezemfundo nenkcubeko. Kwaye oko kuqukumbela uluhlu lwethu lwezinto ukuze wazi malunga nesitishi seTokyo. Ndiyathemba ukuba le nto ikunike umbono wezinto ezizakwenziwa ngaphakathi nangaphaya kwesitishi. Ukufumana ulwazi ngakumbi okanye ukubukela enye ividiyo, cofa iilinki esikrinini ngoku okanye entloko ngaphaya kweJapan Isikhokelo sedot com, isikhokelo sakho esibanzi, esisezingeni eliphambili, sokuya kuqala eJapan. Enkosi ngokubukela. Qiniseka ukuba ubhalisa kwaye ucofe intsimbi yolwazi kwiividiyo ezininzi malunga neJapan. Uhambo olumnandi!
Izinto ezingama-7 ukwazi malunga neSitishi seTokyo | japan-guide.com
< start="3.159" dur="5.491"> Ukusebenzela abakhweli abangaphezu kwesiqingatha sesigidi ngemini, isitishi saseTokyo sesinye sezona zikhululo >
< start="10.17" dur="5.45"> Isikhululo saqala ukuvulela uluntu ngaphezulu kweminyaka eli-100 eyadlulayo kwaye ngokukhawuleza yaba yinto yokuhamba >
< start="15.62" dur="3.31"> isixhobo sokudibanisa iTokyo kunye neJapan iphela. >
< start="18.93" dur="5.28"> Isikhululo seTokyo sikwindawo eyi-mile mile yokuphawula imigca yoololiwe abaninzi. >
< start="24.21" dur="5.09"> Namhlanje, isitishi saseTokyo esisaziyo nesisithandayo sisiphumo seminyaka yokubuyiselwa >
< start="29.3" dur="1.66"> kunye nolwakhiwo. >
< start="30.96" dur="5.759"> Icala likaMarunouchi lisanda kubuyiselwa kubuqaqawuli bayo bangaphambili, bembali, ngelixa iYaesu >
< start="36.719" dur="4.191"> icala libonelela ngenkangeleko yala maxesha. >
< start="40.91" dur="5.6"> Ngamanqanaba ayo amaninzi kunye nokuphakama komhlaba okubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zokuthenga, zokutyela >
< start="46.51" dur="6.75"> kunye neenkonzo, kulula ukuchitha imini yonke ilenga kwiSitishi saseTokyo kunye neendawo ezikufuphi. >
< start="53.26" dur="8.54"> Ukwenza izinto zibe lula kuwe, siqokelele uluhlu lwezinto ezisi-7 ukwazi ngesikhululo seTokyo. >
< start="61.8" dur="5.2"> UJAPAN RAIL CAFE IJAPAN RAIL CAFE yayiyeyokuqala eluhlobo lwayo >
< start="69.43" dur="4.779"> Ifumaneka ngaphesheya kwiSango laseYaesu eliPhakathi lesitishi saseTokyo, inendawo yokuhamba >
< start="74.209" dur="5.541"> ikhawuntare kunye nendawo yokutyela enika abahambi ulwazi olusezantsi kunye neJapan >
< start="79.75" dur="2.08"> izitya. >
< start="81.83" dur="5.5"> Umhlobiso wangaphakathi kunye nezikhumbuzo kwiiJAPAN RAIL CAFE zitshintsha amaxesha ngamaxesha kwaye ugxile kuzo >
< start="87.33" dur="4.36"> mmandla owahlukileyo weJapan ixesha ngalinye. >
< start="91.69" dur="5.36"> Abasebenzi kwikhawuntara yokuhamba banika iingcebiso zokubona indawo kunye nolwazi kunye nenkqubo >
< start="97.05" dur="3.769"> ukudlula koololiwe kunye nokuthengwa kwetikiti. >
< start="100.819" dur="5.461"> Ezi nkonzo zibonelela ngenkqubo yokulungiselela uhambo egudileyo engenazintlungu, ebaluleke kakhulu >
< start="106.28" dur="1.95"> xa undwendwela indawo entsha. >
< start="108.23" dur="6.62"> Isikrini esikhulu esisebenzayo sibonisa iividiyo zokuhamba kunye noluhlu lwemisebenzi. >
< start="114.85" dur="5.29"> Indawo yokutyela yindawo ethe tyaba kwaye ayiqhelekanga, ilungile ukudibana nabahlobo okanye ukugqithisa ixesha >
< start="120.14" dur="2.86"> Ngaphambi okanye emva kohambo lukaloliwe. >
< start="123" dur="4.91"> Ukutya isidlo sangokuhlwa kunokujonga phambili kwisitya saseJapan, kwaye kukudibanisa kunye neentlobo ezahlukeneyo zotywala >
< start="127.91" dur="2.64"> kunye neziselo ezinganxilisayo. >
< start="130.55" dur="5.18"> Iibhokisi ze-takeaway ze-bento nazo zingathengwa, kuba zifutshane ngexesha. >
< start="135.73" dur="6.62"> Okokugqibela, indawo yesiko le-tatami elihonjiswe ngokwesiko kwicandelo le-cafe linikezela iindwendwe >
< start="142.35" dur="6.13"> indawo yokuthatha iifoto zesikhumbuzo. >
< start="148.48" dur="5.66"> inkonzo ye-ecbo yokunxiba Ukufumana ikhitshi yemali engasebenziyo kwisitishi saseTokyo >
< start="154.14" dur="4.16"> ingaba luphando kokuluphengayo ngakumbi ngexesha lexesha lokuncipha. >
< start="158.3" dur="4.76"> Ukusetyenziswa kwenkonzo ye-ecbo ingubo kuvumela umntu ukuba abaleke konke oko kubunzima kwaye ngqo kwa a >
< start="163.06" dur="1.96"> ngaphandle kwemithwalo ngaphandle. >
< start="165.02" dur="4.56"> Iinkonzo zokugcinwa kwemithwalo zemihla ngemihla zinikezelwa nge-ecbo ingubo, elungileyo elungileyo >
< start="169.58" dur="3.35"> kwabo bafuna ukuhamba ukukhanya kwiihambo zobusuku. >
< start="172.93" dur="4.15"> Kukho izinto zokubala ezininzi ze-ecbo kwisikhululo saseTokyo. >
< start="177.08" dur="4.95"> Ukuze usebenzise le nkonzo, yenza nje ukubhuka kwemithwalo kunye nentlawulo kwi-ecbo >
< start="182.03" dur="6.29"> Ingubo yewebhusayithi kunye nentloko kwikhawuntara ngosuku lokulahla umthwalo wakho. >
< start="188.32" dur="5.43"> Isakhiwo saseTokyo Marunouchi Isakhiwo saseTokyo sasekuqaleni senziwe >
< start="193.75" dur="5.48"> nguTatsuno Kingo, umyili olungileyo waseJapan ukususela ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, kwaye >
< start="199.23" dur="1.8"> yagqitywa ngo-1914. >
< start="201.03" dur="6.32"> Nangona kunjalo, isakhiwo sesikhululo sonakaliswa kakhulu ngexesha le-WW2 kwaye inguqulelo elula kuphela >
< start="207.35" dur="3.15"> Isakhiwo saphinda sakhiwa emva kwemfazwe. >
< start="210.5" dur="5.25"> Ukususela ngo-2007 ukuya ku-2012, isakhiwo sesikhululo sabuyiselwa kubuqaqawuli baso bangaphambi kwemfazwe. >
< start="215.75" dur="4.86"> Kuthathe eminye iminyaka emihlanu ukuze iplaza ephambi kwesikhululo ukuba ibe mhle. >
< start="220.61" dur="4.95"> Namhlanje, iindwendwe ziyayibona indlela iSitoko seTokyo esasibonakala ngayo xa sasiqala ukwakhiwa >
< start="225.56" dur="7.68"> ngo-1914, agqibezele kunye namazantsi emantla nakumazantsi emiphetho ngokulandelelana. >
< start="233.24" dur="5.1"> Igalari yesitishi saseTokyo Igalari yeSitishi saseTokyo yindawo yobugcisa >
< start="238.34" dur="3.33"> ngaphakathi kweTokyo Station Marunouchi isakhiwo. >
< start="241.67" dur="4.15"> Ukongeza kwimiboniso yethutyana, igalari yindawo entle yokubona ezinye >
< start="245.82" dur="5.62"> isitena sokuqala kunye nolwakhiwo lwangaphakathi lwesitishi saseTokyo, olubonelela ngokwahlukileyo >
< start="251.44" dur="5.15"> Umxube wobugcisa kunye nelifa lenkcubeko. >
< start="256.59" dur="3.75"> Ukutya kunye nokuhamba kubahambi ngeSitishi seTokyo soze >
< start="260.34" dur="5.14"> babe nexhala lokuba balambile okanye bangafumani nto banokufuna okanye bangayifuni. >
< start="265.48" dur="4.47"> Kukho inqwaba yeeresityu kunye neevenkile zombini ngaphakathi kwendawo enetikiti nangaphandle >
< start="269.95" dur="2.64"> kwindawo yokufikelela simahla yeTokyo Station. >
< start="272.59" dur="5.72"> Ngaphakathi kwindawo enetikiti kukho iGransta kunye neendawo zokuthenga ezinendawo yokutyela apho enye >
< start="278.31" dur="6.32"> Ungafumana iintlobo ezininzi ezilungele ukutya izidlo, iidessert kunye nezikhumbuzo zokuhamba, kunye ne >
< start="284.63" dur="7.42"> I-Ekibenya Matsuri, ivenkile edumileyo ye-bento ethengisa ukutya kwemini enesandisi esivela kulo lonke ilizwe. >
< start="292.05" dur="4.38"> Ngaphandle kwindawo ekhululekileyo yokufikelela, iKitchen Street yinye yeendawo zokutyela ezininzi >
< start="296.43" dur="6.53"> imimandla ebonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokutya. >
< start="302.96" dur="5.45"> Ihotele yesitishi saseTokyo ihotele yesitishi saseTokyo savulwa ngo-1915 njenge >
< start="308.41" dur="5"> ihotele enqabileyo yokutya kwiindwendwe ezibalaseleyo ezivela phesheya kunye nasekhaya. >
< start="313.41" dur="4.82"> Ifakwe ngaphakathi kwesitishi saseTokyo iMarunouchi isakhiwo, iodolo yaseYurophu yasekuqaleni >
< start="318.23" dur="5.46"> Ihotele inamagumbi okundwendwe ayi-150, indawo yokutyela ezilishumi kunye nemivalo, kunye nokuqina kunye >
< start="323.69" dur="2.47"> amaziko e-spa. >
< start="326.16" dur="5.01"> Amanye amagumbi anikezela ngombono omkhulu kwicala laseMarunouchi kwiSitishi seTokyo, kwaye kukho iindawo >
< start="331.17" dur="5.24"> apho iindwendwe zihlala zijonga phezulu ukuze zibone uyilo lwamadayile kwaye ezantsi esitishini >
< start="336.41" dur="1.5"> ngokwayo. >
< start="337.91" dur="5.47"> Ayisiyo kuphela inkonzo yokungena ezindlini ngocwangco, ukuhlala iindwendwe ezifika nguNarita Express >
< start="343.38" dur="8.17"> Uloliwe osuka kwisikhululo senqwelomoya iNarita okanye ngesitimela esinenqwelo moya unokufumana ukonwaba ekungeneni kumnyango wenkonzo yecala. >
< start="351.55" dur="6.31"> Iindawo ezikufuphi nendawo yeSitishi seTokyo Kukho iindawo ezininzi zokubona ngaphakathi >
< start="357.86" dur="5.75"> ukuhamba ngokulula kwesitishi saseTokyo, kubandakanya iMarououchi kunye neOtemachi kwizithili zeshishini >
< start="363.61" dur="2.04"> kunye nebhotwe le-Imperial. >
< start="365.65" dur="5.14"> Kwizakhiwo ezi skyscraper ezijikeleze iSitishi seTokyo kwicala laseMarunouchi, iMarunouchi >
< start="370.79" dur="5.439"> Ulwakhiwo, iShin-Marunouchi kunye neJapan Post tower KITTE zibonelela iindwendwe >
< start="376.229" dur="3.851"> uninzi lwezinto ezahlukeneyo zokuthenga kunye zokutya. >
< start="380.08" dur="5.089"> Iitreyini kwezi zakhiwo zontathu zibonelela ngombono omuhle webala lesitena elibomvu eTokyo >
< start="385.169" dur="1.411"> Isikhululo. >
< start="386.58" dur="5.22"> Kude kude, i-Imperial Palace kunye ne-Imperial Palace East Garden, ezikhoyo >
< start="391.8" dur="6.02"> Kwimihlaba yangaphambili yeNqaba ye-Edo, yenza utyelelo lwezemfundo nenkcubeko. >
< start="397.82" dur="3.5"> Kwaye oko kuqukumbela uluhlu lwethu lwezinto ukuze wazi malunga nesitishi seTokyo. >
< start="401.32" dur="4.21"> Ndiyathemba ukuba le nto ikunike umbono wezinto ezizakwenziwa ngaphakathi nangaphaya kwesitishi. >
< start="405.53" dur="5.78"> Ukufumana ulwazi ngakumbi okanye ukubukela enye ividiyo, cofa iilinki esikrinini ngoku okanye entloko >
< start="411.31" dur="6.199"> ngaphaya kweJapan Isikhokelo sedot com, isikhokelo sakho esibanzi, esisezingeni eliphambili, sokuya kuqala eJapan. >
< start="417.509" dur="1"> Enkosi ngokubukela. >
< start="418.509" dur="5.131"> Qiniseka ukuba ubhalisa kwaye ucofe intsimbi yolwazi kwiividiyo ezininzi malunga neJapan. >
< start="423.64" dur="0.86"> Uhambo olumnandi! >